Parents' Day Message. - Catholic Church Myanmar
Parents' Day Message.
posted Jul 30, 2014, 2:16 AM by Myanmar Signis
UNITY IS STRENGTH - DIGNITY IS in DIVERSITY
Worship of ancestors and respect to elders isagreat hall mark of eastern culture. Today we commemorate the feast of St Ann and Joachim, the parents of our Mother Mary. Jesus said to his disciples : Know the tree by its fruits (Mt 7:17). We know the tree that bore our virgin mother, the model of virtue. We also know the fruit of her womb- Jesus. (Lk 1:42).
Bible calls upon us to “honor your father and Mother Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the LORD your God is giving you. (Ex 20:12; Mk 7:10). St Paul exhorts every child: Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord. (Col: 3: 20)
Myanmar culture considers parents next to God. Every Buddhist and Christian child genuflects and gives respect to the parents. Parents are raised toavery high level in the culture of Myanmar.
So as Christians from Myanmar, we bringadeep understanding of our faith, which celebrates our God asaTrinity – Father, son and the Holy Spirit. We call God our Abba, daddy, so close and so loving and lovable. And because we are sons, God sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. (Gal: 4:6). Yes, Our religion creates all of us as brothers and sisters in the Lord. The integrity of the family affirms the divine origin of all of us, especially our parents who collaborate with God in giving life to us.
As Christians today we celebrate life, we say thanks to our parents, we say thanks to our families. Our Holy Father Pope Francis has convened the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops, to be held in the Vatican from5to 19 October 2014, on the theme “The pastoral challenges of the family in the context of evangelization. More than ever the integrity of family is threatened by sad life styles in the West. Many of the rich countries have given up having families and in many countries there are more pet dogs than children. The gift of life is being proactively refused. Humanity stands ataperil. At this moment we deeply appreciate those young men and women who continue to get into family way and have children despite the challenges of modern life.
I wish to turn our attention this year to the urgent need for unity in the family of Myanmar. We areacolourful nation, like seven children we belong to seven major ethnic groups. We are all sons and daughters ofagreat nation. God has blessed us with abundant gifts – natural and human resources. Our nation has been coveted in history for her beauty, grace of her people and the huge natural resources.
But the nation is bleeding now. Stabbed repeatedly by the dagger of hatred, we have seen people dying in Rakhine state, in Mandalay, in Metalia and in Kachin and Karen. During the military regime, the rulers put upastatue of unity –astatue in which the father is instructing his chronically quarelling sons towards the path of Unity. He asks them to breakasingle stick which every son breaks without any problem, but when he asks the two sons to breakabundle of sticks both the sons could not break. Unity, the father tells the sons, is the strength. Not hatred.
Myanmar stands at the knife edge of life and death today. What we do today and the next five years will determine our fate and history. Prosperity or poverty? Peace or chronic war? Development or displacement? Unity in diversity or unending conflicts? The destiny of Myanmar is in the hands of us all.
But we are not hopeful at the present state. Some of the hard core men have chosen to mainstream hatred in the streets of Myanmar. We condemn all violence, from any one, from any religion. Blood and tears is becoming the norm for some communities in Myanmar. Does the blood haveareligion? Does the tear haveareligion? Every man’s blood is the blood of all Myanmar people. Every human tear is the tear of all Myanmar people. Those who preach hatred against any community are the real enemies of ALL Myanmar people. You are destroying the family spirit of this country. You bring shame and distress to any religion you belong.
Peace is the only path for the family of Myanmar.
What has pained men and women of good will of all religions in Myanmar is the absence of peace in this nation for the last sixty years. After 1947 we did not enjoyasingle year without civil conflict. The blood and tears shed by so many to gain freedom is not for any particular community. All communities worked for this nation. Even among the list of Martyrs who were killed with General Aung San, there were two Muslims, U Abdul Razak, the Minister for Education and Planning and his body-guard Maung Htwe. The rainbow nation envisaged by General Aung San was cast into fire of hatred. He is called as the father of the nation. How can this nation go against the wish of the father, who gave his blood to see freedom for all. Peace cannot be imposed, peace is negotiated among various communities. General Aung San understood this and tried to reach agreement with all in Panglong Agreement. Our nation started asaUnion of Myanmar. The founders who fought for the freedom of this country never envisagedanation based on unitary structure, one nation, one religion and one language.
Why this nation continues to bleed? Why do we continue bury our young men and women in unknown graves in the war areas? Why is that international community is more worried now than ever about the safety of some sections of the nation?
Any nation that refuses to accept that peace comes through justice does so at its own peril. Pope Paul VI urged the world : True peace is born out of Justice. It was envisaged asanation that lives likeafamily, knowing that we are different, our unity lies in diversity and not in uniformity. Our diversity is our wealth. Nations that sought uniformity through violence and coercion has met their hell of hatred, blood bath of war and displacement. Those who refuse to learn from history are condemned to repeat the mistakes of history, warned the English Politician Edmund Burke.
I senseagreat conspiracy against Myanmar during this time. Ordinary men and women wishes to live in peace and harmony. I knowaKachin Catholic Priest who was waiting foralong time forakidney donor to alleviate his painful sickness. A Buddhist monk came forward to donate one of kidney freely, without any expectation. This is the real Myanmar, this is the height of the grace and grandeur of that great religion. In times of Nargis cyclone 2008, how communities reached out one another, protected one another like their own brothers and sisters? If we can share parts of the body with ourselves, how comeanation fights over ‘exclusiveness’ of one religion.
The nation needs education, health and human development. We are emerging fromadark tunnel of oppression. We are all victims. Streaks of hope in the last two years. But powers of darkness also made their presence. We have seen thousands of our Muslim brothers and sisters becoming refugees, hundreds of them killed. Not only them, others too were killed.
Land is being grabbed by big companies, millions of our country men and women could not come back to motherland, human trafficking and drug is destroying the future of the nation. These are the evils this nation must face asafamily. Our leaders must show the sagacity of parents in guiding their children towards great future. We wereagreat nation, we will beagreat nation.
That can come only when all, specially religious leaders from all communities, are blessed with wisdom of our parents, who wish every good for every child and special attention to the weak child. We cannot allowacommunity being persecuted continuously. This nation’s future is embedded in the acceptance that unity in diversity, dignity in difference.
On this parents day, we wish all of elders of the country good health, sagacity and foresightedness. To all the others we end with the warning words of Martin Luther King Jr :
This world will have to weep not for the evil deeds of the bad men
But for the appalling silence of good men.
+ Archbishop Charles Bo. Yangon
မိဘများပွဲနေ့အတွက် ဆရာတော်ချားလ်(စ်)ဘို၏ အမှာစကား
စည်းလုံးခြင်းသည် ခွန်အား - မတူခြားနားခြင်း၌ - ဂုဏ်သိက္ခာ
လေးစားအပ်ပါသော၊ သောတရှင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့၊
မိဘ၊ ဘိုးဘေးများကိုကိုးကွယ်၊ ရိုသေသမှုပြုခြင်းဟာအရှေ့တိုင်းရိုးရာရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ အမိမယ်တော်မာရိယားမိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ရဟန္တာ - အားနားနဲ့ ဂျော့ကင်းတို့ရဲ့ ပွဲကျင်းပကြတယ်။ သခင်ယေဇူး မိမိတမန်တော်ကြီးများကို မိန့်ဆိုတဲ့စကား တစ်ခွန်းရှိတယ်။ မာတေ ၇း၁၇ “ကောင်းသောအပင်သည် ကောင်းသော အသီးကိုသီးတတ်၏” ကညာစင်မာရိယား မယ်တော်ကိုသီးပွင့်စေသော အပင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိကြတယ်။ မယ်တော်ရဲ့ ၀မ်းတော်အသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့ ခရစ်တော်သခင်ယေဇူးကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့သိကြတယ်။ (လုကား ၁း၄၂) အမိအဘကိုရိုသေလေးစားဘို့ ကျမ်းစာတော်မြတ်က အမိန့်ပေးထားတယ်။
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၂၀း၁၂ “ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ပေးသနားတော်မူသော ပြည်၌ သင်၏အသက်တာရှည်မည့်အကြောင်း၊ သင်၏ မိဘကိုရိုသေစွာပြုလော့”
ကောလာသဲ ၃း၂၀ “ သားသမီးတို့ မိဘစကားကိုနားထောင်ကြလော့။ မိဘစကားကို နားထောင်ခြင်း အမှုသည် သခင်ဘုရား နှစ်သက်တော်မူသော အမှုဖြစ်၏” မြန်မာ့ရိုးရာထဲမှာ ဘုရားသခင်ပြီးရင် မိဘများကိုဦးစားပေးတယ်။ ဘုရားနဲ့တစ်ဂိုဏ်းထဲထားပြီးမိဘကို ရိုသေဂါရ၀ပြုကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ သားသမီးများဟာ မိဘများရှေ့မှာ ဒူးထောက်ရှိခိုးကန်တော့ လေ့ရှိကြတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မှီဝဲနေထိုင်ကြတဲ့ ခရစ်ယာန်များ ကိုယ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ အတိုင်း ဘုရားသခင်သည် သုံးပါးတစ်ဆူခမည်းတော်-သားတော်-၀ိညာဉ် တော်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားကို “အဗ္ဗ” အဖေလို့ရင်းနှီးစွာ ချစ်ခင်စွာ ချစ်စရာ ခေါ်ကြတယ်။
”သင်တို့သည် သားဖြစ်သောကြောင့် အဗ္ဗ -အဘဟုခေါ်တတ်သော သားတော်၏ ၀ိညာဉ်တော်ကို သင်တို့ စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဘုရားသခင် စေလွှတ်တော်မူ၏။ (ဂလာတိ - ၄း၆)
ဘာသာတရားဟာအရေးပါသော အချက်တစ်ချက်ကိုလမ်းညွှန်ပြနေတယ်။ ဒို့အားလုံးဟာ မိသားစုတစ်စုတည်းမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဖြစ်ကြ တယ်။ ဒို့အားလုံးဘုရားစီက လာကြတယ်။ ဘုရားရှင်နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး မိဘများဟာ သားသမီးရတနာများ ရရှိကြတယ်ဆိုတာ ဒို့တစ်တွေယုံကြည် လက်ခံကြတယ်။
မိဘများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကန်တော့လျက် - မိသားစုကိုလည်း ကျေးဇူးဦး ပါကရတင်ရှိ ပါတယ်။
ရဟန်းမင်းကြီးသူတော်မြတ် ဖရန်စစ်ကလည်းပဲလာမည့် အောက်တိုဘာ ၅-၁၉ ထိ ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ အစည်းအဝေးကြီးမှာ “ဒီခေတ်သမယမိသားစုများ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိန်ခေါ် သံတွေကို ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်” ပြီးခဲ့သော ကာလထက် ယ္ခုမျက်မှောက်အချိန်မှာ မိသားစုများ
နေပုံထိုင်ပုံဟာအိမ်ထောင်စုများရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတည်တံ့ ခိုင်မြဲမှုကိုလုံးဝ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်။ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ထောင်မိသားစု ရရှိရေးကို မလိုလားကြတော့ဘူး။
နိုင်ငံများများမှာအသည်းစွဲသားသမီးခလေးတွေထက် အသည်းစွဲ ခွေးတွေက ပိုများနေတယ်။ လူ့အသက် ရတနာကျေးဇူးကို လုံးဝမလိုလားတဲ့ ဒီခေတ်ကြီး မှာ လူ့ဘောင်တစ်ခုလုံးအန္တရယ် ချောက်ကမ်းပါး ထိပ်မှာ မတ်တပ်ရပ် နေတယ်။
ခေတ်ရဲ့ ရေလှိုင်းအတွေးအခေါ်စရိုက်ကိုဖီလာဆန့်ကျင်ပြီး- ရိုးစင်းစွာ နေကြ တဲ့ မိသားစုများ၊ သားသမီးတစ်စုတစ်ရုံးနဲ့နေကြတဲ့- မိခင်ငယ်များ၊ ဖခင်ငယ်များကို ဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းပါတယ်။ အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။ တန်ဖိုးထား ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးမိဘများပွဲနေ့မှာ- ကျွန်ုပ်အနေနဲ့- မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ မိသားစု ကြီးကိုအာရုံပြု အရေးပေးလိုပါတယ်။ စည်းလုံးရေးအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရောင်စုံ (၇) မျိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံတော် သားသမီး (၇) ဦးလို၊ တိုင်းရင်းသား (၇) စုံလက်တွဲနေကြတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒို့အားလုံးဟာ ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့သားများသမီးများဖြစ်ကြတယ်။ ဘုရားသခင် ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ကို သယံဇာတကြွယ်ဝခြင်း၊ လူ့အစွမ်းအစထက် မြတ်ခြင်းကျေးဇူးများပိုလျှံစွာနဲ့ ပေးသနားတော်မူတယ်။
သမိုင်းတစ်လျှောက်လှပသိမ်မွေ့ခဲ့တယ်။ တိုင်းသူပြည်သားများသီးခံတတ်တယ်။ သယံဇာတ လည်း ကြွယ်ဝခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ လတ်တလော၊ နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ အထိအခိုက်များပြီး သွေးထွက် သံယိုဖြစ်နေတယ်။ အမုန်းတရားနဲ့ ဓါးထိုးခံနေရတယ်။ ရခိုင်နယ်၊ မန္တလေး၊ မိတ္ထီလာနဲ့ ကချင်နယ်မှာ ညီအစ်ကို အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေကြတယ်။
စစ်အစိုးရမှာတုန်းကဆင်းတုရုပ်ထုများတွေ့ရပါတယ်။ စာပေတွေထဲမှာလည်းပဲ ရေးလေ့ ရှိတယ်။ ဖခင်ဟာရန်ဖြစ်စကားများတဲ့ သားသမီးများကို ထင်းချောင်းလေး တစ်ချောင်းစီ ချိုးခိုင်းတယ်။ လွယ်လင့်တကူချိုးနိုင်တယ်။ ထင်းချောင်းလေးတွေစုပြီး၊ ထင်းစီးကိုကျတော့ မချိုးနိုင်ကြဘူး။ စည်းလုံး ခြင်းဟာခွန်အာ။ အမုန်းတရားမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေ့ မြန်မာပြည်ကြီးဟာအသက်နဲ့အသေ။ ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကြား၊ အစပ်မှာရပ်နေတယ်။ ဒီနေ့လုပ်ကြတာတွေဟာအနာဂါတ်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပုံသွင်းနေကြတယ်။
- အိမ်ပစ် ယာပစ် ရမဲ့ဘဝလား။
- တောမီးမသတ်နိုင်တဲ့ အငြင်းအပွားပဋိပက္ခလား?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကကြမ္မာဟာ ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်။ “ကံ” ဆိုတာ အလုပ်၊ ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ရတယ်။ ကိုယ်ခံရတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လတ္တလောအခြေအနေကို ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင် ရှုလို့မကောင်းပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက် ကုန်သယောင်ယောင်ဖြစ်နေတယ်။ အဓိကကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ဟာ အကြမ်းဖက်ခြင်းကို အားပေး ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ အကြမ်း ဖက်တာအားလုံး၊ အားလုံး မည်သူမည်ဝါကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ကိုးကွယ် ဘာသာကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုံးဝလုံးဝဝေဖန်ရှုတ်ချပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရှိ တစ်ချို့ အသိုင်းအဝိုင်း မှာသွေးထွက်သန်ယိုတာနဲ့ မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ နေရတာဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးလို့ပဲခံစားနေရတယ်။
လူတိုင်းရဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ဟာ - မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သားများရဲ့ မျက်ရည် ပေါက်တွေပါဘဲ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုမုန်းတီးဘို့ရန်ဟောပြော၊ နားချတဲ့ သူတွေဟာ မြန်မာပြည်သူ/ ပြည်သားတွေရဲ့ တကယ်အစစ်ရန်သူတွေပါ။ သင်တို့ဟာ နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ မိသားစု စိတ်ဓာတ်မှန်ကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်။ သင်တို့ဟာကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာယုံကြည်မှုကိုအရှက်ရစေတယ်။ ထိခိုက်နာကျင်နစ်နာစေတယ်။
မြန်မာပြည်မိသားစုကြီး -လျှောက်လှမ်းရမည့်တစ်ခုတည်းသောလမ်းဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း လမ်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာမှီဝဲနေထိုင်ကြတဲ့ စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက လူကြီးသူမများကို ဝေဒနာဖြစ်စေတာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၆၀) လုံး ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိခဲ့ဘူး။ တစ်နှစ်ရယ်လို့ အမျိုးသားအချင်းချင်းစစ်မဖြစ်တဲ့ နှစ်မရှိခဲ့ဘူး။ လွတ်လပ် ရေးရရှိဘို့ အများသွန်းခဲ့တဲ့ သွေးမျက်ရည်ဟာ လူတစ်မျိုးတစ်ဖွဲ့အတွက်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖွဲ့တိုင်း၊ လူစုတိုင်းဒီနိုင်ငံတော်အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ July 19 ရက် 1947 အသက်လှူခဲ့ကြတဲ့ အာဇာနည်တွေကြည့်ရင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့ အတူမူစလင် နှစ်ဦးပါတယ်။ ဦးအပ်ဒူရာဇတ် ပညာရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီး နှင့်အတူသူ၏ သက်တော်စောင့် ရဲဘော်မောင်ထွေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမုန်းစိတ်များနဲ့ လွှမ်းနေရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ သက်တန့်နိုင်ငံကို မီးထဲလောင်းချတာနဲ့ တူလိမ့်မယ်။
သူဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်။ အားလုံးလွတ်လပ်နိုင်ဘို့ မိမိအသွေး ကိုစတေးခဲ့ တယ်။ ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကို ကျွန်ုပ်တို့ဆန့်ကျင်မလား၊ ငြိမ်းချမ်းဖို့ အဓမ္မမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းဖို့ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းဆက်သွယ် ဆွေးနွေးနားလည်မှုရယူရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ အထူးနားလည်ခဲ့တယ်။ အားလုံးနဲ့ သဘောရဘို့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ဘို့ရာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ကြီးများ ဟာတစ်နိုင်ငံ - လူမျိုးတစ်မျိုး ဘာသာတစ်ဘာသာရယ်လို့ လုံးဝ မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူး။ လှပတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ကိုးကွယ်ဘာသာပေါင်းစုံကို ရည်စူးခဲ့ကြတယ်။
-စစ်မြေပြင်မှာကိုယ့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေ လူမသိရှင်မကြားတဲ့ င်္သချိုင်းထဲ မြှပ်နှံသဂြိုလ်ခြင်း ခံနေရတာလဲ။
-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရင်ကထက်၊ အခုတစ်ချို့သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဘာကြောင့်မို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေကြတာလဲ။
တရားမျှတခြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမရှာချင်တဲ့ နိုင်ငံဟာ တရားခြင်းကို ငြင်းပယ်တဲ့ လူများဟာ ကိုယ့်င်္သချိုင်းကိုကိုယ်တူးနေတာဘဲ။ ရဟန်းမင်းကြီးဆဌမမြောက် သူတော်မြတ်ပေါ(လ်) မိန့်ဆိုအားပေးခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာဖြင့် True Peace is born out of justice- စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် တရားမျှတခြင်းမှ မွေးဖွါးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံကျင့်သုံးရမဲ့အချက်က နိုင်ငံတော်ဟာ မိသားစုလိုနေကြ ရတယ်။ ဒို့ဟာ မတူခြားနားကြတယ်။ မတူခြားနားခြင်းထဲမှာစည်းလုံးကြတယ်။ အစစအရာရာ တညီတညာ တည်း ယူနီဖေါင်းဝတ်သလိုနေဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ uniformity ဟာ တိုးတက်မှုကို တန့်စေ ပါတယ်။ မတူခြားနားတဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးနဲ့ မတူခြားနားတဲ့ အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်း နဲ့ မတူခြားနားတဲ့ ရိုးရား၊ စကားနဲ့၊ မတူခြားနားတဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုလေးနဲ့ စည်းလုံး နိုင်တယ်။ စည်းလုံးကြမယ်။ Our diversity is our wealth.
အစစအရာရာကိုတညီတညာတည်းရရှိရေးအတွက် အကြမ်းဖက်ပြီးအတင်းအဓမ္မ လုပ်ကြတဲ့ နိုင်ငံဟာ အမုန်းငရဲမှာဆုံကြမယ်။ သွေးထွက်သံယိုစစ်မြေပြင်မှာ တွေ့ကြမယ်။ အိုးမဲ့ယာမဲ့ အခြေအနေမှာဆိုက် ရောက်ကြမယ်။ အင်္ဂလိပ် နိုင်ငံရေးသမား Edmund Burke အဆိုအရ သမိုင်းရဲ့သင်ခန်းစာကို မသင်ကြား မလေ့လာမချင် သူများဟာသမိုင်းရဲ့ အမှားကိုထပ်ခါ ကျူးလွန်ကြမယ် ဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်ကို ဖျက်စီးဘို့လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများ ရှိနေပါသလား။ သာမာန်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များဟာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်၊ ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ နေထိုင်ဘို့ စိတ်ဆန္ဒလုံးဝ ရှိကြတယ်။ မနှစ်ကပဲကက်သလစ်၊ ကချင် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကျောက်ကပ်ရောဂါရပြီး ကျောက်ကပ်တစ်ခု ရဘို့ စောင့်မျှော်ခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓသံဃာတစ်ပါးပေါ်လာပြီး အခမဲ့ စေတနာ သန့်သန့်နဲ့ ကျောက်ကပ်တစ်ခြမ်း လှူခဲ့တယ်။
ဒီဟာကတကယ့် မြန်မာပြည်မှာကိုးကွယ်ကြတဲ့ဘာသာရဲ့ ထူးမြတ်တဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈နာဂစ်အချိန်အဖွဲ့တိုင်း လူမျိုးတိုင်း၊ ဘာသာတိုင်း၊ တပါးသူစီပြေးသွားကြ၊ ကယ်ကြ၊ ကာကွယ်ကြ ကိုယ့်ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအရင်းပမာ၊စိတ်သဘောရှိကြတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းကို တပါးသူနဲ့ဝေမျှနိုင်ရင် နိုင်ငံတော်ကြီးဟာဘာပြုလို့ ဘာသာတစ်ခုကိုပဲအတည်ပြုပြီး တခြားသူများကို ဘေးချိတ်၊ထုတ်ပစ်ထားချင်တာလဲ။
နိုင်ငံတော်ကြီးဟာအသိပညာလေ့ကျင့်ဘို့ ကျမ်းမာရေးတိုးတက်ဘို့ လူမှု့ အဆင့်အတန်း ဖွံ့ဖြိုးဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖိစီးခံရတဲ့အမှောင်ဂူထဲက ထိုးဖေါက်ထွက်ခါစ အချိန်ဖြစ်တယ်။ ဒို့အားလုံး စတေးခံရတဲ့သားကောင်းချည်း ဖြစ်ကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၂နှစ်အတွင်း မျှော်လင့်စရာ အလင်းရောင်ခြည် ပေါ်စလေး ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့အမှောင်ထုရဲ့ ခွန်အားဟာလဲပဲ လွှမ်းမိုး နေတယ်။ ထောင်သောင်းမက မူစလင်၊ ရခိုင်၊ ကချင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းရောက်ကုန်ကြတယ်။ ရာကျော်မက အသတ်ခံရတယ်။ သူတို့သာမက တခြားတခြားသူများလည်းအသတ်ခံရတယ်။
မြေနေရာများလည်းကုပ္ပဏီကြီးများရဲ့ အလုအယက်ခံရတယ်။ သိန်းသန်းမက မိမိတို့ မြေနေရာစီ ပြန်လာဘို့ခက်ခဲသွားတယ်။ လူကူးသန်းခြင်း၊ မူယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာ မိဘကဲ့သို့အမိရဲ့မေတ္တာနဲ့ အဖရဲ့သတ္တိနဲ့ သားသမီးများကို အနာဂါတ်လမ်းညွှန်ပေးကြရမယ်။ ဒါမှထူးချွန်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်သလိုအနာဂါတ်မှာ ကြီးမြတ် ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
မိဘဟူသည်သားသမီးများ ဝေစုမျှတစေဘို့ သတိထားရတယ်။ မျှမျှတတ ဖြစ်စေရမယ်။
အခြေခံအဆောက်အအုံးများ ဟိုတယ်များ၊ ကားများ၊ လမ်းများ တိုးတက် နေသလို ဆင်းရဲ သားတွေက ဘယ်မှာလဲ။ တိုးတက်တဲ့အကျိုးကို လူနည်းစုပဲ ခံစားကြသလား။ ဆင်းရဲသူများက ပိုဆင်းရဲနေကြသလား။ မိဘဟူသည် သားသမီးများဝေစုကို သတိထားရပါတယ်။
ထူးခြားသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်ရေးအတွက် အားလုံး၊အထူးသဖြင့် ဘာသာတိုင်းမှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များမိဘများရဲ့ မွန်မြတ်စိတ်နဲ့ရှိကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အားချိတဲ့ခလေးကို အာရုံပြု အရေးပေးတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဆက်ပြီးအဖိအနှိပ်ဒုက္ခခံရတာကို အခွင့် မပြုပါဘူး။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တိုးတက် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ခြားနားခြင်း၌စည်းလုံးခြင်း၊ မတူခြားနားခြင်း၌ ဂုဏ်သိက္ခာ ပေါ်စိုက်ထူထားပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးမိဘများပွဲနေ့မှာ သက်ကြီးဝါကြီးလူကြီးသူမများကို နှုတ်ဆက် လိုပါတယ်။
အားလုံးကိုသတိစကားလေးတစ်ခွန်နဲ့ အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ Martin Luther king Jr.ပြောခဲ့တာပါ။
လူကောင်းတွေရဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီးကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ရပါလိမ့်မယ်။